सुबिसु बन्यो एमएएनआरएसमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको पहिलो आईएसपी - DURBAR TIMES
HomeBrandसुबिसु बन्यो एमएएनआरएसमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको पहिलो आईएसपी
सुबिसु बन्यो एमएएनआरएसमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको पहिलो आईएसपी
काठमाडौं । सुबिसु एमएएनआरएस (म्यानुअल्ली एग्रिड नर्म्स फर राउटिङ सेक्युरिटी)मा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालको पहिलो आईएसपी भएको छ ।
एमएएनआरएस भनेको राउटिङ सिक्युरिटी सम्बन्धी परामर्श दिनको लागि इन्टरनेट सोसाइटी ले सुरु गरेको ग्लोबल पहल हो । यसले इन्टरनेट राउटिङमा हुने मस्याको दीर्घकालीन समाधान तथा राउटिङ सेक्युरिटी सम्बन्धी सुरक्षित तरिकाले काम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साइबर सुरक्षा कानुनमा यसलार्य हरेक आईएसपी, एनएसपी, टेलिकोसले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसैमा सुबिसुले हस्ताक्षर गरेको हो । इन्टरनेटजगत्मा हरेक दिन साइबर सुरक्षासम्बन्धी थुप्रै खालका घटना घटिरहेको हुन्छन् । विश्वभर नै राउट चोर्न, चुहावट गर्ने र आईपी ठेगाना स्पुफिङ गर्ने लगायतका समस्या आउने गरेका छन् ।
सोही कारण डीडोस अट्याक, ट्राफिक अनुगमन, राजस्व गुमाउने र रेप्युटेसनल ड्यामेजजस्ता समस्या आउने गर्छ । एउटा आईएसपीको राउटिङ समस्याले विश्वकै इन्टरनेटमा समस्या आउने भएकाले त्यसको निराकरणको लागि मान्र्सको ग्लोबल इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरिएको जनाइएको छ ।
Previous articleजोडीलाई यती एअरलाइन्सको दशैँ अफर
Next articleएनआईसी एशिया बैंकको क्यालेण्डरमा आफ्नो फोटो देख्न चाहनुहुन्छ ? फोटो पठाउनुस्, नगद जित्नुस्
प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा र बढ्न सक्ने इन्टरनेटको मूल्य; चौतर्फी दवाव बीच यसो भन्छन कुलमान
मासिक ३०० रुपैयाँसम्म इन्टरनेटको शुल्क बढाइने, एक्कासी किन बढ्ने भयो शुल्क ?
९१ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच, मोबाइल इन्टरनेटको हिस्सा ६५ प्रतिशत